ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း Archives - Page5of 185 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၄၀) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကြီးဘေးရှိ “နေခြည်ထွန်း� ....
editor | Dec 10, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၉.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၃ ၄၅ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၄၀) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကြီးဘေးရှိ ပိုင်ရှင် ဒေါ်မမကြီး၏ “နေခြည်ထွန်း” ပျိုးဥယျာဉ်တွင် မွေးမြူထားသော မျောက်(၁) ကောင်သည် ပျိုးဥယျာဉ်အတွင်းမှ လွတ်ထွက်၍...
Tree fallen at the Yaysakyo township, Magway region
editor | Dec 6, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
Dec52020, at about 13 35,aEucalyptus tree fell down on the road and street light wiring at the No7ward, Yaysakyo township, Magway region. At 13 40, fire fighters from Yaysakyo township fire station removed the tree which blocked the road. No one was injured and...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၅/၃)နှင့် (၃၅/၄)ကြားတွင် ယာဉ်တိ� ....
editor | Dec 3, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၅/၃)နှင့် (၃၅/၄)ကြားတွင် ရန်ကုန်ဘက်မှ နေပြည်တော်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးမုန်းခတ် မောင်းနှင်သည့် HIJET အမျိုးအစား(အဖြူရောင်)ယာဉ်အား လားရာတူ နောက်မှ...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၈/၅)နှင့် (၁၂၈/၆)ကြားတွင် � ....
၂.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၇၅၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၈/၅)နှင့် (၁၂၈/၆)ကြားတွင် နေပြည်တော်ဘက်မှ ရန်ကုန်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးဝေလင်းအောင် မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမှတ် ALPHARD အမျိုးအစား(အဖြူရောင်)...
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ သီရိဈေးနှင့်နှင်းဆီ လမ်းထောင့်၊ ခြံဝန်းအတွင်းရှိ ရေတွင်းထဲသို့ လူ(၁)ဦး ခ� ....
editor | Dec 1, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ သီရိဈေးနှင့် နှင်းဆီလမ်းထောင့်ရှိ (၄၀ x ၆၀)ပေ၊ ခြံဝန်း ပိုင်ရှင် ဦးစံမြင့် (တစ်ဦးတည်းနေထိုင်သူ)သည် ၂၈.၁၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ခြံဝန်းအတွင်းရှိ အကျယ်(၄)ပေ၊ အနက် (၄၀)ပေခန့်ရှိ ရေတွင်းထဲသို့ အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီး ခုန်ချ၍...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)၊ ယုဇနစီးပွားရေးတာဝါရှေ့တွင် ယာဉ်တိုက်မှုသတင်� ....
editor | Nov 30, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂၉.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၀ ၅၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှင်စောပုလမ်းအတိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ဘက်မှ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း မောင်ခြူဝင်းထိန် မောင်းနှင်လာသော FORD အမျိုးအစား (အနက်ရောင်) မော်တော်ယာဉ်သည် မောင်းနှင်လာစဉ် ဓမ္မစေတီလမ်း၊...
Page5of 185« « Previous...34567...102030...Next »